မိုးစက်ပွင့်: ပုံရိပ်ထဲက မိန်းကလေး (The Girl in the Picture)
Vista 8 December 2011 at 11:28
Kay 8 December 2011 at 12:52
သိချင်တာ တွေ ပို သိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ ကနေဒါ မှာ ပါရဂူဘွဲ့လည်း ရပြီးသွား တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း တီဗွီ မှတ်တမ်းကား တခု မှာ ကြည့်ဖူးလိုက်ကတည်းက..စိတ်ဝင်စား နေတာ။ ကျေးဇူး ညီမ.း)
အီးတီ 8 December 2011 at 19:59
တိမ်ပြာ(မနောမြေ)9December 2011 at 06:42
အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပါ ရှာဖတ်ပါအုံးမယ်
jasmine(တောင်ကြီး)9December 2011 at 12:53
စိတ်ဓါတ်လဲအတော်ပြင်းပုံရတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ဘ၀က အခက်အခဲများစွာထဲကနေ အောင်မြင်မှုကိုရခဲ့ပါပဲ
ဘိုဖြူ 11 December 2011 at 23:27
မယ်ကိုး 27 December 2011 at 14:40
ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ comment ကြည့်မှ မျက်ရည်ကျမတတ်ထိခိုက်ရတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်မှန်း သိရပါတယ် ..ကျေးဇူးပါး)
MG THANT 27 December 2011 at 15:39
မျောသွားတယ်ဗျာ... ဒီလိုစာမျိုးတွေ အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကိုတော့ အရင်ကတည်းက မှတ်မှတ်ထင်ထင် တွေ့ခဲ့မိဖူးတယ်... ကျေးဇူးပါခင်ဗျ...
shwezin yaw 22 November 2012 at 19:40
အခက်ခဲပေါင်းများစွာကနေ လွတ်မြောက်ဖြတ်သန်းလာနိုင်ခဲ့တဲ့ သူ၏ ဘဝက ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်အောင် တန်ဖိုးကြီးမားလှပါတယ်။
Anonymous 19 May 2013 at 06:11
achieve it. The people today that invest in this camera, possibly have an limitless price range, or
are expert photographers. For more information, take
ကျက်သီးထမိအောင် တုန်လှုပ်မိတယ်။ Hueကိုရောက်ဖြစ်တော့ မီးရှို့ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးအကြောင်းကိုလည်း ဖတ်မိတယ်။ ခေတ်တခေတ်မှာ စတေးခံလူသားတွေ ဘယ်လောက်များခဲ့သလဲ။ စစ်ဆိုတဲ့ အရာရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဟာ အခုလို များပြားလိုက်တာလို့ နှလုံးသွင်းမိတယ်